Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Uhlelo olusha lwe-Benny Hill Show lubuyile futhi
Mayelana ne-Beadle - Umbukiso Wekhamera Efihliwe ubuyela endleleni
I-Benny Hill Show nezinye izintandokazi ze-TV zangaphambilini zizobuyela ezikrinini ze-TV kusukela namhlanje kusihlwa kuqhubeke UKhisimusi we-TV lowo, isiteshi se-nostalgia esisakaza isikhathi sikaKhisimusi ku-Freeview, Freesat, ne-Sky.
Ngaphandle Benny Hill, isiteshi sizoletha izibiliboco zamaholide kusukela kushejuli yakudala kuhlanganisa Mayelana ne-Beadle kanye nezipesheli ze-TV zikaKhisimusi ezivela Kenny Everett, UMike Yarwood, uTommy Cooper futhi Qhubeka iqembu.
UKhisimusi we-TV lowo ukwakhiwa kabusha kwesizini kwe Igolide le-TV lelo, ingobo yomlando yesiteshi se-TV esisakaza kulo lonke elase-UK ku-Freeview channel 91, i-Sky channel 187 ne-Freesat channel 178. Izinhlelo eziningi zikaKhisimusi ze-TV zizotholakala kunethiwekhi ye-TV yasendaweni ye-That's TV etholakala ezindaweni ezingu-20 e-UK ku-Freeview channel 7. noma 8.
Ihora lokuqala ku-That's TV Christmas namuhla (ngoLwesine 18 Novemba 2021) ngo-9pm liyinkokhelo ephindwe kabili I-Benny Hill Show.
Eminye imibukiso emasontweni ezayo ihlanganisa Mayelana ne-Beadle, umbukiso wekhamera ofihliwe owethulwa u-prankster Jeremy Beadle, eyaqala ngo-1986 iminyaka engu-20 iyenza ibe ngumbukiso wamakhamera ofihliwe omude kunawo wonke emhlabeni ngokuqhubekayo. I-The Benny Hill Show noma i-Beadle's About ayizange isakazwe yinoma yisiphi isiteshi se-TV e-UK iminyaka engu-19.
U-Benny Hill ubekwe njengeqhawe ngosomahlaya abaningi besimanje, okuhlanganisa isihlabani se-TV nombhali UDavid walliams owamncenga kakhulu kumabonakude, ethi kuTwitter ngo-2017: “Ngifisa sengathi uBenny Hill agujwe kakhulu kumabonakude“. Usomahlaya Tim Vine of Engaphumi Udumo uthi ugcine wonke amakhasethi akhe amadala eBenny Hill VHS ethi: “Angikhathali ngakho, futhi ngicabanga ukuthi ubukelwa phansi kakhulu. "
Ngasekupheleni UCaroline Aherne, umbhali we-sitcom Umndeni wakwaRoyale, utshele idokhumentari yeChannel 4 ngo-1998: “Ngangimthanda kakhulu uBenny Hill“, ngenkathi usomahlaya UBen Miller of U-Armstrong noMiller udumo lwaphawula: “Umsebenzi wakhe wokuqala wawunzima kakhulu. Ungusomahlaya ophumelele kunabo bonke emhlabeni wonke owake wakhiqizwa yiBrithani. "
U-Benny Hill wayengumdlali we-TV waseBrithani iminyaka engamashumi amane, okokuqala ku-BBC futhi kamuva ku-ITV lapho izinhlelo zakhe zaqhubeka iminyaka engu-20 kuya ku-1989. Moon landing futhi wawina indondo yokuqala kweziningi ngo-1954 lapho evotelwa ukuthi i-TV Personality of the Year. I-Benny Hill Show yathola imiklomelo eyi-11 ngesikhathi sakhe ne-ITV futhi izinhlelo zakhe zathunyelwa emazweni angaphezu kwe-140. Kodwa lezi zasendulo zaseBrithani, amalungelo alawulwa yi-Estate yakhe kanye ne-Thames TV, azizange zinikezwe ilayisense kunoma yimuphi umsakazi wase-UK cishe iminyaka engama-20.
Lokho kuyashintsha namuhla kusihlwa lapho i-That's TV Christmas yethula omunye umgijimo wamaviki angu-7 ngesizini yezipesheli ze-Benny Hill.
Leyo yiNhloko yezinhlelo zikaKhisimusi ka-TV, uKris Vaiksalu, uthe: “Sijabule ngokuthola amalungelo emidlalo emibili emikhulu emlandweni we-TV yaseBrithani, i-Benny Hill Show kanye ne-Beadle's About, ukuze siqanjwe kabusha ngesizini yethu kulo nyaka. Le midlalo iyingxenye yamagugu esizwe sethu. Ukubuka amahlaya amadala kuyisiko likaKhisimusi kazwelonke kodwa sekuphele amashumi amabili eminyaka lezi zintandokazi zingekho emikhosini.
"Sonke sidinga injabulo yemikhosi elandela unyaka odlule. Ababukeli bethu basigcwalise ngezicelo zokubonisa u-Benny Hill futhi sijabule kakhulu ngokuthi sikwazi ukufeza lesi sifiso sikaKhisimusi. Kodwa kunama-crackers amaningi ku-That's TV Christmas. Sihlele i-Christmas TV nostalgia-fest enamagama adume kakhulu ku-TV nomculo kusukela eminyakeni engamashumi amane edlule. Sihlose ukunikeza ababukeli bethu isikhathi sikaKhisimusi esikhethekile esigcwele izinkumbulo zemilingo. Kungcono uqaphele… ngoba u-Benny Hill no-Jeremy Beadle babuyile emsebenzini wakho ngalo Khisimusi!"
Ngonyaka odlule i-TV kaKhisimusi kabusha ibhrendi yaheha ababukeli abangaphezu kwezigidi ezingu-4.4 emasontweni amane kuya zingama-27 kuZibandlela 2020 (umthombo: BARB). Isiteshi manje sesinwebe ukusakazwa kwaso futhi sitholakala kulo lonke elase-UK ku-Sky and Freesat kanye naseFreeview.
I-TV leyo izobonisa imilayezo esesikrinini eyenza izibukeli ziqaphele ukuthi okunye okuqukethwe okufakwe ezinhlelweni kubonisa izindinganiso zesikhathi lapho imidlalo yadalwa khona ekuqaleni.
Izidlo zikaKhisimusi eziboniswa ku-That's TV Christmas zihlanganisa:
I-Benny Hill Show - ukukhethwa kweminyaka engama-20 kaBenny Hill eThames TV 1969 kuya ku-1989
Mayelana ne-Beadle - umbukiso wamakhamera ofihlekile wangoMgqibelo ebusuku owawuyinsakavukela yezinhlelo ze-ITV kusukela ngo-1986 kuya ku-1996
Qhubeka noKhisimusi - Izipesheli ezine zikaKhisimusi ezinoshukela ezivela ku-Carry On crew ezenziwe ngo-1969, 1970, 1972 kanye no-1973
Mike Yarwood Christmas Specials – i-impressionist kanye nosomahlaya bekuyinsakavukela yezinhlelo ze-TV kaKhisimusi ngawo wonke ama-'70s kanye nama-'80s. That's TV Christmas uthole amalungelo emidlalo yakhe ekhethekile kaKhisimusi kusukela ngo-1982, 1984 kanye no-1985.
Izipesheli Zonyaka Omusha zika-Kenny Everett- Izipesheli zoNyaka Omusha zikasomahlaya we-madcap kusukela ngo-1978, 1979 no-1980 ezinezihlabani ezinamagama amakhulu okuhlanganisa Rod Stewart, Cliff Richard, David Bowie, David Essex, Billy Connolly, Bob Geldof futhi AmaPistol Ocansi. Futhi, njengendlela yokwelapha eyengeziwe yabalandeli bakaKenny UKhisimusi we-TV lowo izobe ikhombisa uhlelo olukhethekile olwenzelwe ukukhishwa kwevidiyo futhi akukaze kuboniswe ku-TV okuhlanganisa abangani UCleo Rocos futhi ngasekupheleni kwesikhathi Lionel Blair
UTommy Cooper - ukukhethwa kwezipesheli ezivela kuTommy Cooper oyedwa kuphela, umpetha womlingo oxubile
UMCULO, UBUCIKO KANYE NEDOCUMENTARY
I-Pavarotti: Isipesheli sikaKhisimusi – i-tenor yodumo yenza ezakudala zamaholide kulolu hlelo e-Notre Dame Cathedral e-Montréal, ejoyinwe ikhwaya yabafana, Les Petits Chanteur du Mont-Royal, nekhwaya yabantu abadala, Les Abafundi baseMassenet (1978)
I-Irish Tenor Trio: Inganekwane KaKhisimusi Yakudala – ingxubevange yamaculo endabuko kaKhisimusi kanye nemiculo yase-Ireland eyenziwa yi-Irish Tenor Trio
100% Okuphambili kukaKhisimusi – amahithi kakhisimusi achitha ishadi kusuka kuma-'60s kuze kube namuhla
Isizini yamadokhumentari kubantu abayisithonjana nezehlakalo zekhulu leminyaka elidlule ezihlanganisa i-'70s Punk e-London, Princess Diana, John Lennon, King George VI, Margaret Thatcher, David Bowie futhiUMichael Rockefeller
Ngemva kokukhiqizwa kabusha kwebhrendi kaKhisimusi Izinkonzo ezijwayelekile ze-TV zizoqala kabusha ngeshejuli entsha ngomhlaka-4 Januwari 2022.
MAYELANA NOMBUZO KABENNY HILL
I-Benny Hill Show kwakuwuchungechunge lwezinhlobonhlobo zamahlaya waseBrithani ngesitayela saseVaudeville elakhiwe ngumculi waseBrithani uBenny Hill owadlala kusukela zingama-23 kuZibandlela 1962 kuya zingama-26 kuZibandlela 1968 ku-BBC futhi kusukela ngomhlaka-19 Disemba 1969 kuya ku-1 Meyi 1989 ku-ITV.
U-Benny Hill wazalelwa e-Alfred Hall ngo-1925 eSouthampton futhi ukhunjulwa umndeni kanye nofunda nabo 'njengomsomi wekilasi'. Esemusha, wayeka isikole futhi wasebenza njengobisi ngaphambi kokukhonza eButhweni Lezempi LaseBrithani phakathi neMpi Yezwe II. Ngalesi sikhathi, ubejabulisa amasosha emidlalweni eyahlukene futhi wasebenzisa igama lakhe lesiteji, uBenny Hill, ukuze ahloniphe usomahlaya uJack Benny. Ngemuva kwempi, u-Hill wadlala emahholo omculo eLondon futhi wathola ikhefu ku-TV ngemuva kokuqhathanisa uhlelo lokuzijabulisa lwe-BBC. Imidlalo yakhe yaduma emhlabeni wonke ngeminyaka yawo-'70s, yazuza iThames TV u-£26 million ngokuthengiswa. UHill washonela eLondon ngo-1992 eneminyaka engama-68, izinyanga ezimbili ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo.
Lapho u-Hill efa, umlingisi waseMelika uJack Lemmon wathi: "Eminyakeni yamuva usomahlaya engangimthanda ngaphezu kwakho konke kwakunguBenny Hill, owayengumpetha emkhakheni wakhe. Osomahlaya abaningi baletha inqwaba yempushana; U-Benny ukunikeze inganono. "
MAYELANA NOBEADLE MAYELANA
Mayelana ne-Beadle yadlala ku-ITV kusukela ngo-1986 kuya ku-1996 yethulwa yi-practical joker, uJeremy Beadle. Lolu hlelo luzodlala imigilingwane eminingi namaqhinga kumalungu omphakathi abengaqaphile aqoshwa isinyenyela kusetshenziswa amakhamera afihliwe. I-Beadle ituswa ngokwenza intando yeningi kumabonakude, ebeka abantu bangempela enhliziyweni yezinhlelo zakhe. Inkanyezi yayingumsekeli omkhulu Wezingane ezine-Leukemia futhi ikhulise imali engaphezu kwezigidi ezingu-£ 100 ye-charity, ithola i-MBE ngo-2001. U-Beadle wabulawa yi-pneumonia ngo-2008 eneminyaka engu-59 ubudala.
UMaurice Cole, owaziwa kangcono njengoKenny Everett, wayengusomahlaya wesiNgisi kanye ne-radio disc jockey. Ngemva kwezinkulumo emsakazweni wabaphangi, waba ngomunye wo-DJ bokuqala ukujoyina i-BBC eyayisanda kwethulwa iRadio 1 ngo-1967. U-Everett wabe esejoyina i-Capital Radio eLondon ngemva kokuxoshwa yi-BBC ngo-1970 ngenxa yezinkulumo eziphathelene nonkosikazi kaNgqongqoshe kaHulumeni. U-Everett wayengumngani osaziwayo okubalwa kubo uFreddie Mercury, umculi ophambili weQueen, ahlangana naye ngesikhathi ethula iCapital Radio Breakfast Show ngo-1974.
Ngasekupheleni kweminyaka yawo-70 u-Everett waletha abalingisi bakhe berediyo be-zany kanye nama-jingles kumabonakude enza uchungechunge olune lwe-ITV (Thames) ngaphambi kokuthi azingelwe ngokungemthetho yi-BBC1. Izinhlelo ze-ITV bezidume ngokucula nokudansa kweqembu eliculayo, iHot Gossip, eyahlelwa ngu-Arlene Phillips, owaba nguDame futhi wasebenza njengelinye lamajaji okuqala ku-Strictly Come Dancing. Yonke imidlalo ye-Thames equkethe i-Hot Gossip ka-Arlene Phillips, okuhlanganisa nezipesheli ezidume kabi zikaNcibijane, izosakazwa ku- That's TV Christmas.
Usomahlaya uMichael McIntyre uchaze uKenny Everett “omunye ubaba” wakhe ngenxa yobungane phakathi kwabazali bakhe nesihlabani. Ubaba kaMcIntyre wayengumbhali weskripthi kuhlelo lukaKenny Everett.
U-Everett washona ngo-1995, eneminyaka engu-50.
MAYELANA LEYO INETWORK YE-TV
UKhisimusi we-TV lowo (ezoboniswa njengokuthi “Leyo I-TV Xmas” kumasethi amaningi we-TV) isetshenziswa yi-That's TV, ingxenye ye-That's Media Group.
Leyo i-TV isebenzisa izinsiza ze-TV zasendaweni ezingama-20 kanye nesiteshi sikazwelonke sase-UK okwamanje esimakwe ngokuthi Igolide le-TV lelo, zonke lezi ziphinde zibhalwe kabusha UKhisimusi we-TV lowo kusukela ngomhlaka 18 Novemba 2021 kuya kuJanuwari 4, 2022.
Lezo izinhlelo ze-TV zasendaweni (isiteshi se-Freeview 7/8) sisebenzela amakhaya angaphezu kwezigidi ezinhlanu ezindaweni ezingama-20 zase-UK. I-TV leyo iletha izindaba ezigxile endaweni kanye nolwazi lwendawo ngayinye eduze 'nomgogodla' wohlelo lwenethiwekhi ohlanganisa nostalgic music, ukuzijabulisa namadokhumentari.
Leso isiteshi sikazwelonke se-TV yase-UK eyethulwe ngoJulayi 2021 futhi manje isitholakala e-UK jikelele ku-Freeview channel 91, Sky channel 187 kanye ne-Freesat channel 178. Leso isiteshi se-TV sika-UK esibanzi, esibhalwe ngokuthi Igolide le-TV lelo kuze kube umhla ziyi-18 kuNovemba 2021, 'Iyikhaya Le-Nostalgia' futhi ngokuyinhloko iletha amahlaya, umculo nokuzijabulisa kanye namadokhumentari amayelana nabantu nemicimbi yekhulunyaka eledlule.
Njengengxenye yomqulu wayo wokuzibophezela komphakathi, i-That's TV igunyazwe yi-Living Wage Foundation njengoMqashi Wangempela Ophilayo.